Fianankaviana 228 eny La Réunion kely Notoloran’ny governora vary 5 taonina
Tsena tetsy Analakely Noravan’ny CUA tsy nananany hantra
Vao maraina dia efa rakotra mpitandro filaminana sy mpiasan’ny kaominina nandrava ireo tsena manamorona eo Analakely mifanila amin’ny faran’ny zotra 137. Tsy an-kitsitsy, tsy nisy resaka fa tonga dia raikitra ny fandrodanana ireo tsenan’ny mpivarotra eo amin’ny 30 eo.
Ampahimanga Ambohimanambola Niteraka fahasorenana indray ny Tosika Fameno
Nivoaka tamin'ny alarobia atoandron'ny 28 mey 2020 ny lisitr'ireo anaran'olona hisitraka ny Tosika Fameno ao amin'ny fokontanin'Ampahimanga Ambohimanambola Antananarivo Avaradrano.
Orinasa JIRAMA Tsy mbola nampiakatra vidin-jiro aloha
Tamin’ny volana Janoary taona 2018 no fantatra fa nampiakatra vidin-jiro farany ny orinasa JIRAMA.
Alaotra Mangoro Mpamboly vary 4 000 mihitsoka any amin’ny faritra hafa
Ao anatin` ny fihibohana tanteraka Aloatra Mangoro noho ny fisian` ny aretina Covid-19 ao amin` ity faritra ity.
Dr Fiarovana Lovanirina Manentana ireo tantsaha hitahiry vary
Fotoanan` ny fararano ny mponina any amin` ny distrikan`i Betafo. Misy fidinan` ny vidim-bary any amin` ireo toerana fanangonam-bary.
Andohatapenaka III Tranga mateti-piseho ny fanariana zaza vao teraka
Nahitana zaza rano iray nisy nanary tao anatina sachet plastika teny Andohatapenaka III afaka omaly maraina.
Imorona - Mananara Avaratra Naolany ny zafikeliny vao 11 taona monja
Tsy tsara intsony ny mahatokitoky olona. Lehilahy iray 58 taona efa Dadabe no nahavita nanao herisetra ara-nofo tamin’ny zafikeliny vavy vao 11 taona monja tany Imorona, distrikan’i Mananara Avaratra.
Tonga teny Ampefiloha "La Réunion kely" ny Governoran'ny Faritra Analamanga Hery Rasoamaromaka sy ny delegasionina niaraka taminy omaly 4 martsa 2020, nanolotra vary 5 taonina ho ana fianakaviana 228
sahirana eny an-toerana. Samy hahazo vary 20kg isam-pianakaviana izy ireo. Fanampiana izay nampitondrain'ny Filoha Andry Rajoelina taorian'ny fandalovany teny an-toerana, raha ny fanazavana. Nisy ihany koa ny fihainoana ny hetahetan'ireo mponina eny an-toerana momba ny fanirian'izy ireo ka hijery akaiky izany ny Faritra Analamanga izay tarihan'ny Governora Hery Rasoamaromaka.